India oo guddoontay diyaaradihii ugu horreeyay ee dagaalka ee –Rafale Jet ee uu Faransiisku u farsamaynayo
Mogadishu - 13:03:45
Tuesday October 08, 2019 - 21:25:48 in Wararka by Super Admin
Waxaa maanta waddanka Hindiya lagu wareejiyay 36 diyaaradaha dagaalka oo ah kuwii ugu horreeyay ee noocoodu yahay Rafale Jet ee ay horey uga dalbadeen waddanka Faransiiska bishii September 2016.
Diyaaradahan dagaalka ayaa waxaa farsameynaysay shirkadda ‘Dassault Aviation’ ee fadhigeedu yahay magaallada Merignac ee Waqooyi galbeed ee Faransiiska, waxaana ku wareejinta Hindiya qaybtii ugu horreysay ee diyaaraddan lagu soo aaddiyay maalinta dabaaldegga ciidammada Hindiya.
Wasiirka Gaashaandhigga Faransiiska Florence Parly iyo dhiggeeda Hindiya Rajnath Singh ayaa ku kulmay xarunta shirkadda Dassault si 36 diyaaradood oo tijaabo ahaan ay u dalbadeen Hindiya faraha looga saaro.
Hindiya ayaa ansixisay 2007 in ay iibsato 126 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, waxaana markii dambe qandaraaskan qaadatay shirkaddan Faransiiska.
Dhanka kale Hindiya ayaa halgan dheer u soo martay diyaaradahan, maadaama mucaaradka dalkaasi ay ka soo horjeesteen in shirkaddaasi Faransiiska ah qandaraaska la siiyo, iyo sidoo kale iyadoo Hindiya ay dalbatay in 108 diyaaradood gudaha dalkeeda lagu sameeyo, taasoo Faransiiskuna diiday.
Laakiin markii dambe Hindiya ayaa shirkadda Dassault ka iibsatay 36 diyaaradood, taasoo furfurtay is mari waagii labada dhinac, waxaana diyaaradahani ay sare u qaadi doonaan ciidammada Cirka Hindiya oo haatan ku hubeysan diyaarado aan casri ahayn oo u badan Mig 21, 27.
Hindiya ayaa qorsheheedu yahay in 57 diyaardood oo nuuca dagaalka ah ay u iibiso ciidammadeeda badda, halka kuweeda Cirkana ay doonayso in ay u keento 110 diyaaradood.
Faransiiska ayaa isticmaala diyaaraddaha Rafale tan iyo 2004, laakiin shirkadda samaysa ayaa dhanka dibadda ka weysay cid ka iibsata.